Nyocha banyere ihe kpatara nsogbu PVC PVC a na-agbanyeghị-News-Topflor China nwere oke
Echiche:17 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2021-04-13 Mmalite: Saịtị
Floorlọ ọ bụla nwere ike ịnwe nsogbu n'ụdị a n'oge eji ya, ma ọ bụrụ na enwee nsogbu na ala, ndị na-azụ ahịa ga-ebu ụzọ kwuo ọrụ dịịrị ogo ala. N'ihe banyere PVC plastik na-agba agba, ọ na-eme ka ala daa. Ihe kpatara ya abụghị nsogbu dị mma!
N'ezie, enwere ọtụtụ ihe na-eme ka ọnụ ala PVC plastik gbagọọ, onye ndezi na-esote ga-enyocha ha n'otu n'otu.
Nke mbụ, ọ bụ àgwà. Ferlọ plastik na-adịghị mma nwere nkwụsi ike na-adịghị mma, ọ dịkwa mfe ịda mbà ma ọ bụ gbasaa mgbe ekpughere ya na oyi na okpomọkụ na-ekpo ọkụ, n'ihi ya, ọ na-adị mfe ịlụ ọgụ. The mgbe emeputa si ịkwanyere plastic n'ala mmepụta nkọwapụta, n'ala àgwà na-ekwe nkwa, inogide, na ike belata ohere nke onu warping.
Nke abuo, ihe owuwu ihe owuwu nwere ike ime ka ala gbaghaa. Plastickwanyere plastic n'ala paving ngwa ọtụtụ ndị na-eji mama, abụọ-kwadoro nrapado, ịgbado ọkụ waya, wdg, elu-edu mama nwere ike ime ka ala na ala na-agbasosi ike, mgbe usụhọde mama ga-adị mfe ime ka ala-na-adịghị ike agbaso na mfe ihicha .
N'ezie, enweghi ike ileghara ogo iwu ụlọ anya. Ndị ọkachamara na-ewu ụlọ ga-enyocha ọnọdụ owuwu ihe na ntọala ntọala ala tupu ha ewu. Ha bụkwa ndị ọkachamara na-ahụ maka ịkwa ákwà. Agbanyeghị, maka nrụrụ aka na-enweghị ọrụ, a naghị atụle ọnọdụ ikuku na ntọala ala, dịka ala. Uneven, ájá na gravel, nsị mmiri, wdg, ga-eme ka ala ahụ kpoo.
N'ikpeazụ, iji ya eme ihe n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị, iji nlezianya na-elekọta ya, ịgbanye mmiri na-adịte aka, wdg ga-emekwa ka ala daa.
Ya mere, mgbe ị na-azụ akwa PVC dị elu, iji hụ na ala ahụ apụtaghị na ọ ga-emebi emebi dị ka o kwere mee, ị ga-ahọrọ onye nrụpụta oge niile dị ka Jiqiu. A na-eji ngwaahịa ọhụrụ emepụta ngwaahịa niile, jiri ngwaahịa kwụsie ike, ma n'otu oge ahụ họrọ ngwa ngwa dị elu. Site na ndị ọkachamara na-ewu ụlọ, ọ nwere ike belata ọtụtụ nsogbu nke ihe ndị ahụ n'onwe ha ma ọ bụ ihe ndị eji eme ihe.